तराईको डुबानको कारण भारतीय मनपरी संरचना हाे - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
तराईको डुबानको कारण भारतीय मनपरी संरचना हाे
सीमा विवाद तथा डुबान समस्या
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ २०७६ साउन ३२ गते शनिवार
नेपाली भू–भागबाट बग्ने पानी रोक्नको लागि भारतले अनेकन खालका संरचनाहरु बनाएको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा ड्याम, ठूला खालका तटबन्ध, नहरलगायतका संरचनाहरु धेरै नै खडा गरिसकेको छ । पछिल्लो समय त उसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै सीमा क्षेत्रमा सडकको नाममा अग्लो बाँध नै बनाएको छ । राजमार्गको नाममा बनाइएको त्यो संरचना १० फिट अग्लो र ९० फिट जति चौडा छ । यी संरचनाहरुले वर्षाको समयमा परेको पानी र नेपालबाट भारततर्फ जाने सबै नदीहरुको प्राकृतिक बहाव रोकिदिएसँगै तराईमा डुबानको समस्या बढिरहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म ब्यारेज बनाउन जम्मा एउटा सम्झौता भएको छ । तटबन्ध बनाउनका लागि ४ वटा जति सम्झौता भएको छ । तर, भारतले एकतर्फी हिसाबले धेरै संरचनाहरु खडा गरिसकेको छ ।
जस्तो कपिलवस्तु जिल्लाको दक्षिणमा सीमा नजिकै भारतले मणिसागर बाँध बनाइएको छ । त्यो बाँध बनाउनका लागि सन् १९२३ मा ब्रिटिस अंग्रेजसँग नेपालको सम्झौता थियो । सम्झौतामा बाँध बनाउँदा ढोका नहाल्ने भन्ने थियो । तर, बर्तमान भारतले १४ वर्ष अगाडि मात्रै १५ वटा ढोका बनाइएको छ । जसको कारण कपिलवस्तुको त्यस छेउछाउका भू–भाग पूरै डुबानमा पर्दै आएका छन् । वर्षाको बेलामा ७० हेक्टर जति जमिन डुबानमा पर्दछन् । त्यहाँ हिउँदको बेलामा पनि १५ हेक्टर जति जमिन क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ ।
दुई देशको सीमाको छेउछाउमा ब्यारेज, बाँध र तटबन्धजस्ता संरचनाहरु बनाउँदै गर्दा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै देशको सम्झौता बेगर त्यस्ता संरचनाहरु बनाउन पाइँदैन् । तर यहाँ सम्झौता विपरितका संरचनाहरु बनिरहेका छन् । जसको कारण तराईमा सँधै डुबानको समस्या परिरहेको हुन्छ ।
एक देशबाट अर्को देशमा जाने नदीको सीमारेखाबाट ८ किलोमिटर माथिल्लो वा तल्लो क्षेत्रमा कुनै देशले सहमति नलिई कुनै संरचनाहरु बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । त्यो सम्झौतालाई सन् १९९९ मा दुई देश बिच पटनामा भएको बैठकमा पनि स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको थियो । तर, सहमति त्यस्तो भएपनि सिमा छेउछाउमा धेरै संरचनाहरु बनेका छन् ।
जस्तो बाँके जिल्लाको सिमामा लक्ष्मणपुर बाँध बनाइएको छ । २२ कि.मि. लामो त्यो बाँधले प्रत्येक वर्ष नेपालको ठूलो भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । अहिले पनि नरइनापुर गाउँपालिकाको भाग पूरै जलमग्न भएको छ ।
जबसम्म मापदण्ड विपरित यी संरचनाहरु खडा रहिरहन्छन्अ, नि नयाँ संरचनाहरु बनिरहन्छन् , तबसम्म तराई डुबानको समस्या झनै बल्झदैं जान्छ । राज्यले आफ्ना जनता अनि भूगोलको रक्षा गर्ने नियम विपरित खडा गरिएका संरचनाहरु फाल्नका लागि पहल गर्नुपर्छ ।
(श्रेष्ठ प्रसिद्ध सीमाविद् हुनुहुन्छ । )
पछिल्लाे - नेकपाका उपाध्यक्षमा क. वामदेव गौतम, विभागीय जिम्मेवारीहरूको विवरण
अघिल्लाे - के नरेन्द्र माेदी तानाशाह बन्लान् त ?